Nin ayaa duulaya duulimaad guriga ku soo noqda - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA • aan caadi ahayn • DADKA & LIFESTYLE • SAYNISKA • TECH & TELECOM Nin ayaa diyaarad u duulaya guri
Magaciisu waa Bruce Campbell, oo ah injineernimada korantada shaqeeya. Ninka ayaa loo yaqaanaa inuu yahay qof aad uwanaagsan oo ku nool Maraykanka, Hillsboro, Oregon. Waa hagaag, ka feker in Bruce uu sameeyey diyaarad uu gurigiisa sameeyey!
Bruce wuxuu leeyahay dabacsanaan: si uu nolol kale u siiyo diyaaradaha loogu talagalay xoqitaanka. Wixii isaga ah, xitaa haddii diyaaraddu aysan awoodin inay duuliso, waa in aan la burburin. Nala soo ogoow sida Bruce loo dhisay gurigii hore!
source: http: //tops.easyvoyage.com/avion-maison/ taboola utm_source = & utm_campaign = desktop-avionmaison-ww w.ad & utm_medium = CPC & utm_content = le10sport